विचार « Janata Samachar
बलात्कृतलाई सम्मान दियौँ, न्याय कहिले दिन्छौँ ?
पीडित महिलाका वैकल्पिक नाम राखिँदैमा, पीडित पक्ष भनेर क्याप्सन दिँदैमा, तिनका मुख छोपी तीसँग नरमपन व्यवहार अपनाउँदैमा सञ्चारजगत वा सञ्चारकर्मीको दायित्व पूरा हुँदैन । तिनले मात्र सम्मान दिन्छन्, न्याय दिँदैनन
किन हुन्छ इर्ष्या, के गर्छ इर्ष्याले ?
–प्रतिमा चौधरी इर्ष्या के हो ? इर्ष्या एउटा भाव हो । जुन कोहीसँग कुनै यस्तो बस्तु हुनाले आउन सक्छ, जुन तपाईं प्राप्त गर्न चाहनु हुन्थ्यो अथवा यदि कुनै बस्तु कोहीसँग
संसद रोक्ने रणनीतिमा कांंग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद बैठक रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ । मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार बनेदेखि विभिन्न बाहनामा संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी
बलात्कारीको पैसाले पुरिन्छ त छोरीको घाउ ?
समाजका गन्यमान्य व्यक्ति नै अपराधी पत्ता लगाएर कानुनी कठघरामा ल्याउनुको साटो आर्थिक प्रलोभनमा दोषीलाई चोखो बनाउन उदत हुन्छन् । प्रहरी पनि उजुरी लिनै मान्दैन । –राधिका जोशी काठमाडौं । कञ्चनपुरमा
स्तनपानः जीवनको आधार
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ३६% वामपुड्के, १०% उचाइअनुसार दुब्लो (लुरे), २७% उमेरअनुसार कमतौल र २४% जन्मँदा कमतौल भएका, ६८% जति ६ महिनादेखि
समृद्धिको सेतो क्रान्ति
देशले समृद्धिको सपना बोक्ने र सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएको बेला नेपाली किसानहरुले दुध सडकमा खन्याएर सरकारको बिरोध गरेको समाचार नेपाली मिडियामा छायो । सरकारले किसानलाई दुग्धजन्य उत्पादनका
आधुनिक शिक्षामा वैदिककालीन दर्शन
गोरुगाडा कसरी बनाउने ? हवाईजहाज निर्माण प्रक्रिया के हो? छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने? घर निर्माण कसरी गर्ने? बिजुली कसरी निकाल्ने? हातहतियार कसरी बनाउने? रथहरु कसरी निर्माण गर्ने? खेती कसरी गर्न?
जोशी, तर्लान् त विवादको कोशी ?
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने–नबन्ने चुनौतिको कसीमा छन् । प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएको जोशीबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा छानबिन भइरहेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विभिन्न विवाद
अनसन टुट्यो के गर्ला कांग्रेस ?
चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ‘२०७५’लाई हुबहु पारीत गर्नुपर्ने भन्दै सत्याग्रहमा बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीले बिहिबार २७ औं दिनको अनशन तोडेका छन् । यसले उहाँको जीवन रक्षा र सरकारले परिमार्जनसहित संसदमा प्रस्तुत
कसरी जोगिने आर्सेनिकबाट ?
नेत्र भण्डारी आर्सेनिक कसरी बुझ्ने ? आर्सेनिक एउटा रासायनिक तत्व हो । यो खनिज र धातुहरुमा पनि पाइन्छ । सामान्यतया यसको रङ्ग, गन्ध र स्वाद पनि हुँदैन, तर कहिलेकहिँ पहिलो